टिपरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । हरेक १० वर्षको एक पटक लिइने राष्ट्रिय जनगणनाको नमूना माघ एक गतेबाट हुने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उक्त कुराको जानकारी दिएको हो । सही
काठमाडौं । हत्या आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री तथा निलम्बित सांसद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले थप ५ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थपेको छ । यसअघि अदालतले ७ दिन थुनमा राखेर अनुसन्धान
एजेन्सी । जम्मू–कश्मीरको कुपवाडा जिल्लामा रहेका सैन्य पोष्ट र गाउँमा पाकिस्तानले गोलाबारी गरेको भारतले आरोप लगाएको छ । तांघर सेक्टरमा भएको भारी गोलीबारीमा दुई भारतीय सैनिकको ज्यान गएको साथै एक सर्वसाध
विश्व राजनीतिले मात्र हैन नेपाली राजनीतिले समेत अत्यन्त रुचाएको शब्द हो, समाजवाद। संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान समेत त्यसबाट अछुतो हुन नसक्दा मुलुकको संविधान नै समाजवाद उन्मुख हुन पुगेको सर्वविदितै
शनिवारको दिन । अफिसको बिदा । काठमाडौको खाल्डोबाट बाहिर जाने निधो गरियो । मेरा अत्यन्तै हितैसी लक्षेन्द्र सिंह र म बनेपा जाने योजना बनायौं। नयाँ ठाउँ घुम्न पाएकोमा हामी निकै खुसी थियौं । दिनभरि घुम्यौ
काठमाडौं । हरेक १० वर्षको एक पटक लिइने राष्ट्रिय जनगणनाको नमूना माघ एक गतेबाट हुने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मे
काठमाडौं । हरेक १० वर्षको एक पटक लिइने राष्ट्रिय ज
काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक इतिहास नियाल्ने हो भन...
आख्यानकार तिवारीको तेस्रो उपन्यास ‘निहारिका बजारमा
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज(बिहीबार) सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । हिजो तोलामा रु. ७० हजार ६०० मा कारोबार भएको छापावाल सुन आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार ...
सुनको भाउ घट्यो !
भारतबाट भित्रिने खसीबोका घट्यो
डिसी । विश्व कै सम्राट राज्य न्यूयोर्कमा बस्दै आएका चर्चित यूवा गायक रोकेश गुरुङको परीगीत गत अक्टोबर ८ दशैको दिन सार्वजनिक भएको छ । उनले उक्त परी गीत...
कुसुम श्रेष्ठको ‘कान्छा कान्छी’ सार्वजनिक
ट्वीटरमा सोनाक्षीको मजाक : सोनाक्षीको घरको नाम रामायण हो !
काठमाडौं  । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज(शनिबार) र आइतबार पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदैछ । राष्ट्रिय भिटामिन...
भोग लाग्नु, समयमा निद्रा लाग्नु राम्रो स्वास्थ्यको संकेत हो । तर अहिले हामी न त समयमा खाना खाइरहेका छौ न त सुति नै रहेका छौ। हामीले सुनेका छौं, हाम्रा...
एजेन्सी । जम्मू–कश्मीरको कुपवाडा जिल्लामा रहेका सैन्य पोष्ट र गाउँमा पाकिस्तानले गोलाबारी गरेको भारतले आरोप लगाएको छ । तांघर सेक्टरमा भएको भारी गोलीबा...
शोले फिल्मको ‘कालिया’ रहेनन् !
गान्धी भारतीय थिए, तर भारतको मात्र थिएनन् – प्रधानमन्त्री मोदी